Online Dating Fahadisoana Kely - The Top 10 Fahadisoana Men Ataovy Rehefa nifandray Women Online
Last nohavaozina: Jan. 04 2018 | 5 min namaky
Ireto ny zavatra folo voalohany tokony tsy rehefa ny vehivavy nifandray an-tserasera. Izany no ho zava-dehibe indrindra an-tserasera sy ny fifandraisana fiarahana mamaky torohevitra izay taona rehetra.
Fahadisoana #1: Naniraka azy 'fotsiny’ ny Wink
Indrindra aterineto toerana mampiaraka dia aoka ianao mandefa “winks” na “liana” maimaim-poana.
Inona anefa no milaza ho azy ny momba anao?
Rehefa tena mafana zazavavy mahazo ny Wink, dia mahita lehilahy izany tsy matotra amin'ny te hifandray aminy sy ny fikororohana mora loatra ny $10 mpikambana saram-.
Inona no fomba tena tsara iray hanombohana eny fifandraisana. Tsy!
Izy ihany koa dia mahafantatra fa ny Wink dia mora “polisy-avy”. Na iza na iza dia afaka amin'ny alalan'ny horonan-taratasy an-jatony ao amin'ny Internet ny mombamomba sy ny handefitra amin'ny zavatra rehetra izay mihetsiketsika.
Izany, avy amin'ny fomba fijerin'ny, nahoana izy mandany fotoana eo ianao, raha misy am-polony maro ry zalahy maka fotoana mba handefa ny tena hafatra isan'andro?
Fahadisoana #2: Tsy manana toetra vao haingana sary ao amin'ny mombamomba azy
Ity iray ity dia tokony ho mora, fa ny zava-misy, ny ankamaroan'ny olona tsy mampakatra ny sary. Ny antontan'isa momba ity iray ity dia mazava tsara. Profiles amin'ny sary mahazo 10 heny fijery noho ny tsy; ary ny mombamomba ny kalitao sary mahazo 4 heny noho ny mombamomba amin'ny mahantra sary.
Hanontany anareo. Rehefa miditra ao amin'ny toerana ny fiarahana sy ny fikarohana, Tsy mitady vehivavy amin'ny sary eo amin'ny mombamomba azy aloha?
Nahoana izy hisy fiovana ny?
Maro ny vehivavy no mihevitra fa manana zavatra afenina raha tsy mametraka ny sary N toy angamba ny vadinao.
Raha tsy tianao ny sary, manana matihanina iray natao. Maro ireo sary matihanina tolotra izay manao na inona na inona, fa mamorona sary lehibe noho ny fiarahana amin'ny aterineto ny mombamomba.
Raha te-hitsangana ny vintana manohitra ny hafa avy any ry zalahy, mampakatra tsara toetra sary.
Oh, iray tena manan-danja kokoa taratasy N hahazoana antoka fa mampakatra ny RECENT sary. Tsy misy mandiso fanantenana kokoa noho ny hihaona olona iray, ary hahatsapa fa ny sary dia naniraka anao i 20 taona sy 40 kilao lasa izay!
Fahadisoana #3: Fandefasana hafatra amin'ny foto-kevitra mankaleo
Zava-misy #1: Ry zalahy betsaka kokoa noho ny ankizivavy roa, fara fahakeliny, ny anankiray teo amin'ny toerana fiarahana indrindra an-tserasera sy ny nentin-drazana izany isa.
Zava-misy #2: Ankizivavy tsara tarehy mahazo am-polony maro sy ny hafatra winks na inona na inona nomena andro.
Afaka manana ny tena mahatahotra mombamomba ary afaka mandefa azy mahaliana indrindra hafatra, saingy mety tsy hahita mandrakizay.
Amin'ny fomba ahoana koa?
Simple. Fanindroany, vehivavy tsara aterineto maro mombamomba mahazo winks sy ny hafatra isan'andro.
Omeo azy ny antony hanokatra ny hafatra aloha! Tsy maintsy miavaka eo amin'ny olon-kafa rehetra, na dia manana vintana avo ny ho voafafa ary tsy namaky.
Mandany fotoana be toy ny crafting foto-kevitra mahaliana iray tsipika rehefa manao an-tsoratra ny sisa ny hafatra.
Anontanio azy ny fanontaniana na mifandray manokana ny tsipiriany sasany amin'ny mombamomba azy izy mba ho fantatrareo tokoa ianao mamaky azy io, ary tena liana tamin'ny zavatra mihoatra noho ny ny tarehiny.
PEJY: 1 2 3